Thailand Elite vhiza yekufambisa kadhi chirongwa ichiri mune yakatsvuka mushure memakore gumi nematanhatu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Thailand Elite vhiza yekufambisa kadhi chirongwa ichiri mune yakatsvuka mushure memakore gumi nematanhatu
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Investments • nhau • Kuvakazve • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Thailand Elite vhiza yekufambisa kadhi
Kadhi reThailand Elite vhiza rekufamba rakatanga kuunzwa panguva iyoyo-Mutungamiriri Thaksin Shinawatra makore gumi nematanhatu apfuura. Thailand Ropafadzo Kadhi Co (TPC) haisati yamboita purofiti uye yakaunganidza zvikwereti zvemamiriyoni mazana maviri nemakumi mana emakumi mana emwaka gore rino remari.
Kana iyo kambani ikakwanisa kunyoresa mamwe mazana maviri nemazana maviri enhengo nyowani gore rino, inogona kutenderera ichienda kune yakasviba.
Ivo vane Elite vhiza kadhi yekufamba havasi kufamba zvakadaro nekuda kwe COVID-19.
Tourism Authority yeThailand iri kushanda neThailand Ropafadzo Kadhi kupa mamwe maElite mabhonasi mune ramangwana.
TPC inoti iyo kambani ichave mune yakasviba gore rino razvino kana nhengo nyowani mazana maviri nemazana matanhatu dzikangowanikwa yeThailand Elite vhiza kadhi rekufamba. Nhamba huru kwazvo yenhengo dzeAsia maChinese. MuEurope, iwo musiyano ndewe UK.
Vazhinji vanobata vari kunonoka kushanya kuThailand nekuda kwehurongwa hwezvido pamwe nehutachiona hutsva, kunyanya muBangkok. Iyo Thailand Ropafadzo Kadhi Co inoti paive ne 93 muzana yekukura mwero mukutengesa mumwedzi gumi nembiri yapfuura. Paive ne12 nhengo dzichangonyorwa-nyowani dzine huwandu hwakawanda hwe2,552 pazere.
Iyo Elite visa inopa akawanda-ekupinda vhiza kubva pamakore mashanu kusvika pamakumi maviri ekudzosera mari yekutanga kubva ku5 baht kusvika pamusoro pemamiriyoni maviri emabhah, maererano nesarudzo yakasarudzwa kubva kune dzimwe nzira gumi. TPC inoti pane misika mikuru miviri parizvino. Vamwe vekune dzimwe nyika vanopfuura makore makumi mashanu vari kuwana iyo Elite visa seimwe nzira kune gore-rekurega basa mavhiza uye kuwedzerwa kwekugara izvo zvinowedzera kuda general inishuwarenzi yekurapa kuwedzera kune COVID-yakatarwa kavha.